EMUI 10 misokatra beta azo alaina ho an'ny andian-tsarimihetsika MediaPad M6 | Androidsis
EMUI 10 misokatra beta azo alaina ho an'ny andiany MediaPad M6 ankehitriny
Talohan'ny nanombohan'ny MatePad Pro, Huawei dia nanambara ny Andian-tsarimihetsika MediaPad M6. Anisan'izany ny maodely 8.4-inch, ny Fanontana Turbo 8.4-inch ary ny kinova 10.8-inch. Ireo telo ireo dia ampandehanan'ilay fikirakira Kirin 980, izay mahatonga azy ireo ho takelaka lehibe.
Rehefa natomboka izy ireo, ny takelaka telo rehetra dia nihazakazaka EMUI 9.1 miorina amin'ny Android Pie tao anaty boaty. Omaly, Nanambara i Huawei fa misy kinova beta misokatra an'ny EMUI 10 izay azo alaina amin'ireo takelaka telo rehetra. Ity kinova EMUI ity dia mifototra amin'ny Android 10.
Huawei milaza izany Ny fanavaozana beta misokatra dia mitondra fanatsarana ny fahombiazan'ny rafitra sy mpanampy AI nohatsaraina. Tokony hahazo UI vaovao sy maody maizimaizina manerana ny rafitra ihany koa ianao.
Raha te-hahazo ny fanavaozana beta dia mila mandeha amin'ny app Huawei Club ianao ary misafidy ny faritra EMUI eo amin'ny zoro havanana ambony. Tokony hisy safidy hisafidianana ny "Beta Update".
Ny andiana MediaPad M6 dia misy efijery LCD IPS, mitovy fakan-tsary 13 MP aoriana ary fakan-tsary 8 MP eo aloha. Na dia misy aza ny kinova 8.4-inch sy 10.8-inch amin'ny 4GB + 64GB sy 4GB + 128GB, ny Turbo Edition dia tonga amina fikirakirana tokana: 6GB + 128GB.
Ny maodely 10.8-inch ihany koa no maodely tokana misy scanner an'ny dian-tànana sy jack audio. Izy io koa dia misy fatran'ny batterie 7,500 mAh avo lenta raha oharina amin'ny fahaizan'ny bateria 6100 mAh an'ny maodely 8.4-inch.
Huawei's EMUI 10 dia nahatratra maherin'ny 10 tapitrisa mpampiasa mavitrika ary maodely finday mihoatra ny 33
Ny mahazatra: Mamporisika anao izahay hanana ny takelaka tsirairay mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi miorina sy haingam-pandeha hampidina ary hametraka ilay fonosana firmware vaovao beta. Zava-dehibe koa ny fananana haavon'ny batterie tsara hisorohana ny mety tsy fanelingelenana mandritra ny fizotry ny fametrahana. Azafady mba mariho fa ny fanavaozana dia tokony hivoatra tsikelikely, ka mety mbola tsy voarainao izany, raha toa ianao ka mpampiasa sasany amin'ireo maodely ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » EMUI 10 misokatra beta azo alaina ho an'ny andiany MediaPad M6 ankehitriny
Ny lalao Android 25 tsara indrindra tamin'ny folo taona